Home Wararka Qoor Qoor oo maanta lacago loo soo dhiibay u qaybinayo Gudiga Cusub...
Qoor Qoor oo maanta lacago loo soo dhiibay u qaybinayo Gudiga Cusub ee Doorashada Galmudug
Sida MOL ay u xaqiijieen howlwadeeno ka tirsan xafiiska Ra’iisal Wasaare Xasan Kheyre iyo gudiga gaarka ee ka shaqeeynaya doorashada Axmad Qoor Qoor, waxaa wal-wal iyo cabsi hor leh la soo daristay Xasan Kheyre oo ay ka go’nayd in uu madaxweyne uga dhigo Galmudug Axmad Qoor Qoor. Wal-walkaan ayaa yimid ka dib markii Ururka Al Sunna ay magacaabeen gudi doorasho cusub oo maamulaya doorashada Galmudug.
Axmad Qoor Qoor oo uu gacan yare u yahay Xildhibaan Xuseen Iidoow ayaa waxa ay maanta galinkii hore bilaabeen in ay lacago ku kala fur-furaan gudiga cusub si gabi ahaanba gudigu isku casilo. Go’aanka ah in lacago loogu iibsado gudiga cusub ayaa lagu gaaray shir xalay lagu qabtay gutiga Xasan Kheyre.
Mid ka mida gudiga shalay la magacaabay oo la hadlay MOL kana gaabsaday in aan magaciisa sheegno ayaa yiri “..Walaalow saakay waxa qadka taleefanka igu soo waalay ninkii Qoor Qoor ahaa iyo will yar uu u shaqeeeya isaga oo isugu key sheegay in la yiraahado Xuseen Iidow, hade waxa ay iyiraahdeen is casil lacagna waan ku siinaynaa, waxa ay taa iigu dareen waxaan kuu soo diraynaa si aad warbaahinta ula hadasho”.
Ninkaas ayaa ku daray “ Waxa aan u sheegay in aan diyaar u ahaynin in aan qadiyada Galmudug lacag ku iibsado, hadana waxa ay waceeyn Ugaaskeygii oo ay isna lacag u balan qaadeen, hadana waxa ay waceen adeerkey oo jooga Gobolada Dhexe… waanu yaabnay, ma garanayno waxa ku dhacay waxa eyse igula ekaayeen rag waashay, kana naxay go’aankii Shiikh Maxamed Shakir Xafudu laahi”.
Xasan Kheyre ayaa rajo ka qaba in uu lacag ku kala diro gudiga cusub ee doorashada Galmudug ee uu ku dhawaaqay Madaxa Xukuumada Galmudug. Halkii laga raadin lahaa dib u heshiiseen, wadatashi iyo is qancin ayaa Kheyre ugula muuqaty in uu lacag iyo awood ciidan uu ku muquuniyo Ururka Al Sunna iyo dadka reer Galmudug.